डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ३०० किलो तौलको विश्वकै ठूलो ताला किन बनाइयो ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियडेढ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ३०० किलो तौलको विश्वकै ठूलो ताला किन बनाइयो ?
एउटा तालाको तौल ३ सय किलो र यसलाई बनाउने खर्च डेढ लाख रुपैयाँ । धति धेरै मेहनत र पैसा खर्च गरेर यो विशाल ताला किन बनाइयो होला ? करिब ७० प्रतिशत काम सकिएको यो तालाको बारेमा सुन्नेहरु छक्क पर्छन् । भारतको अलीगढको ज्वालापुरीमा यो ताला बनेर तयार भइसकेको भए पनि यसलाई अझै सुन्दर लुक दिनको लागि केही परिवर्तन गरिँदैछ ।